Otomatiki wekusona chiteshi
Bartack uye muenzaniso wekusona
Bhatani uye parera kunamatira
Fudza uchibva paruoko
Pisa muchina wekudhinda
Mushini wekutengesa unopisa: otomatiki muhomwe yekukwidza muchina
Labor ichave yakanyanya kudhura mune ramangwana. Automation inogadzirisa matambudziko emawoko, nepo digitization ichigadzirisa matambudziko ekutonga. Akangwara kugadzira ndiyo yakanakisa sarudzo yemafekitori. Yedu otomatiki yehomwe yekugashira muchina, 4 madhairekitori panguva imwechete yekupeta muhomwe, kupeta uye kusona ...
Mukana we laser homwe yekugashira muchina muna 2021
Mushure mekunge indasitiri yemuchina wekusona yaona "runyararo" rwegore rapfuura, gore rino musika wakaunza kupora kwakasimba. Yedu fekitori mirairo inoramba ichiwedzera uye isu tiri kunyatsoziva nezvekudzoka kwemusika. Panguva imwecheteyo, kugoverwa kwenzizi dzeshure ...
Muponesi wefekitori yezvokupfeka: otomatiki yekumhanyisa muhomwe setter
TS-199 nhevedzano muhomwe setter ndeye-yekumhanyisa otomatiki yekusonera muchina wehembe muhomwe kusona. Iyi michina yekumisikidza muhomwe ine yakakwira yekusona chaiyo uye yakagadzikana mhando. Zvichienzaniswa neyechinyakare manyorerwo kugadzirwa, basa kugona rinowedzerwa ne4-5 nguva. Poshi...
World Kutanga: Otomatiki Laser Pocket Welting Sewing Machine
Iwe uchiri kunetseka nezvekusawana mushandi ane hunyanzvi? Iwe uchiri kunetsekana nekukwira kwemitengo yevashandi? Iwe uchiri kukurumidza kuti odha ipere? Iwe uchiri kunetsekana nekuoma uye kunonoka kwekusona zipi yehomwe? Boka redu achangobva D ...
Nyungudika yakavhuvhuta kugadzirwa
Kambani yakavaka chivakwa chitsva chefekitori uye yakawedzera makumi maviri nemakumi maviri ekunyungudutsa mitsara yekugadzira, ine kugadzirwa kwemazuva ese kwematani gumi nemashanu. Iye zvino isu tine yakasimba timu yehunyanzvi, inosangana nezvinodiwa zvemarudzi akasiyana ekushandisa kwakasiyana kwemask maererano nezvinodiwa zvakasiyana zvevatengi vakasiyana kune asiri-standard cus ...
Isiri-yakarukwa machira uye yakanyungudika yakaputirwa machira ekugadzira
Kambani yedu inoshanda pamwe chete neChangying isina-yakarukwa machira Co, Ltd kuwedzera mitsara yekugadzira. Ikozvino kuburitswa kwezuva nezuva kweisina-yakarukwa machira matani gumi, uye kuburitsa kwesimbi yakanyungudika yakaputirwa matani matatu. Yakanyatso kuongororwa mune zvese mbishi zvigadzirwa, Yemhando-yakatarisana kubva pazasi zvinhu kusvika masterbatch.
Mask Chigadzirwa Shopu
ne admin pane 20-04-02
Panguva yechakakona coronavirus muChina, kambani yedu yakagamuchira kurairwa kubva kuhurumende kugadzira maski muchina uye masiki. Kambani yedu yakakurumidza kuronga vashandi vehunyanzvi kuti vaite R & D uye kugadzirwa. Masiki isu takagadzira asvika padanho repamusoro muindu ...
Topsew otomatiki Sewing Equipment Co, Ltd.
Kusvikira kumagumo kwa2019, isu tine yakazara mutsara wehomwe setter muchina, bartack pateni yekucheka muchina, Mukoma mhando pateni yekucheka muchina, Juki mhando pateni yekucheka muchina, Bhatani snap, uye pearl yekubatanidza muchina, uye mamwe marudzi e otomatiki ekusonesa michina. 1. Pocket setter muchina: 199 dzakateedzana homwe ...
Pakati Pakati paNove, Takaenda KuAmerica Mumiriri Kwekudzidzira Pocket Kudzidziswa
Kudzidziswa kunosanganisira: 1. maitiro ekugadzira chirongwa. 2. Maitiro ekushandura chirongwa. 3. maitiro ekushandura anosunga uye kugadzirisa muchina wehomwe yehomwe, mushure meizvozvo tinovadzidzisa maitiro ekushandura kiramba uye kugadzirisa muchina wehomwe yehomwe. 4. Maitiro ekugadzirisa dambudziko kana ...
Mukupera kwaNov, 2019, Takaenda kuBangladesh Mutengi Fekitori Yekuzvimisikidza Pocket Kuisa Machine Kudzidziswa.
Vasati vashandisa imwe muhomwe yesimbi muchina, uyezve semi-otomatiki muhomwe yekumisikidza muchina. Iye zvino shandisa edu otomatiki esimbi yemahomwe setter michina, inogona kuchengetedza anoshanda, uye nguva. Mutengi wevatengi vari kudzidza zvakanyanya kuoma. Kana vachidzidza, ivo zvakare vanoita zvinyorwa. Nyanzvi dzakangwara. Mushure megore ...
No.1 Yewang mugwagwa, Yexie taundi, Songjiang dunhu, Shanghai, China